कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएपछि के हुन्छ ? « GDP Nepal
( Monday, July 26, 2021)
कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएपछि के हुन्छ ?
Published On : 28 February, 2021 7:27 pm
काठमाडौं । विश्वमा हाल परिक्षण पश्चात आएका विभिन्न खोप प्रयोगमा आएको छोटो समय भएको र खोप लगाएपछि यसबाट सुरक्षित हुने निश्चित समय एवं समग्र प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन अझै जारी नै छ । यसैले खोप लगाए पश्चात कति समयसम्म शरीरमा एन्टीबडी रहन्छ भन्ने बारे यकिन रुपमा बताउन नसकिने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
खोप लगाइसकेकाहरुमा विशेषतः ३ सातापछि एन्टीबडी विकास भएको पाइएको छ । तर सबै व्यक्तिमा उस्तै किसिमले एन्टीबडी विकास नहुन पनि सक्छ ।
हाल खोप कम्पनी एवं वैज्ञानिकहरुका अनुसार खोपको दुवै मात्रा लगाएपछि शरीरमा प्राकृतिक एन्टीबडी विकास भई ५ देखि ६ महिना वा एक वर्षैसम्म पनि एन्टीबडी रहीरहने दाबी गरेका छन् ।
यद्यपी यसबारे पनि अनुसन्धान जारी छ । साधारणतया खोपको पहिलो डोज लगाएपछि एन्टीबडी विकास हुन थाल्ने र दोस्रो डोज पछि सो स्वतः बढ्दै जाने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् ।
शरीरमा एन्टिबडी बनेपछि मेमोरी सेलले निकै लामो समयसम्म कोरोना भाइरसलाई पहिचान गर्ने तथा त्यस्तो भाइरस शरीरमा आएमा एन्टिबडी सक्रिय भएर भाइरसलाई नष्ट गर्ने गर्छ ।
एकपटक कोरोना संक्रमण भइसकेका मानिसमा त्यसैले पनि संक्रमणको सम्भावना कम हुन सक्छ किनकी उनीहरुमा प्राकृतिक एन्टीबडी विकास भइसकेको हुन्छ । तर कति समयसम्म सो एन्टीबडी शरीरमा रहन्छ, यो भने अनुसन्धानको क्रममै रहेको छ ।
तसर्थ स्वास्थ्य समितिले एकपटक संक्रमण भइसकेका र खोप लगाएकाले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुपर्ने जनाएको छ ।
कोभिडको खोप लगाएपछि मृत्यु हुन्छ, दीर्घकालीन असर हुन्छ, यो खोपले डीएनएलाई असर वा नष्ट गर्छ, प्रजनन क्षमता ह्रास हुन्छ लगायतका विभिन्न भ्रम फैलिएका छन् ।
यद्यपी यी सबै गलत भएको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ । खोप लगाएका मध्ये केही मानिसमा ज्वरो आउने, जाडो हुने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, थकाइ लाग्ने, मांशपेशी वा शरीर दुख्ने, टाउको दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, स्वर भासिने, रुघा लाग्ने, वाक्वाकी लाग्ने, बान्ता हुने, पखाला हुने समस्या देखिन सक्छ । तर गम्भीर समस्या देखिएका घटना न्यून छन् ।
पहिलो मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिले चार हप्तामा दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्छ । दोस्रो मात्रा तीन हप्तादेखि १२ हप्ताको समयमा लगाउन मिल्ने बताइएको छ ।
दीर्घ रोगीले पनि खोप लगाउन सकिन्छ तर रगत पातलो बनाउने औषधी खाइरहेका, स्नायू सम्बन्धी औषधी सेवन गरेका, गर्भवति स्तनपान गरिरहेकाहरुलाई भने खोपको सिफारिस नगरिने गैरआवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिका संयोजक सन्जिव सापकोटाले जनाए ।
लामो परीक्षणपछि ल्याइएकोले पनि यी खोपहरु सुरक्षित रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
उमेश श्रेष्ठको पक्षमा शेखर गोल्छाको ट्वीटः समृद्धिको ठूलो हिस्सेदार अपहेलित भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेसँगै आलोचना सुरु
अर्थमन्त्रीबाट लोडसेडिङ निवारणमा जस्तै उदाहरणीय कार्यको अपेक्षाः चौधरी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिका
९९.८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौंमा सञ्चय कोषको सवा ११ अर्ब ऋण
काठमाडौं । दोलखामा निर्माण हुने ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानीका लागि त्रिपक्षीय
मनसुन सक्रिय आजदेखि, मौसमविद् भन्छन्ः सतर्क रहौं
काठमाडौं । सोमबारदेखि मुलुकभर मनसुन सक्रिय हुने भएकाले सतर्क रहन मौसमविदहरुले आग्रह गरेका छन् ।
नर्भिकले हरेक शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा दिने
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले अब प्रत्येक शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा संचालन गर्ने भएको छ